काठमाडौं – नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी तीव्र नभएको भए राजधानीको पश्चिमी भेगस्थित चन्द्रागिरि नगरपालिका–६ थानकोट नजीकैको मातातीर्थमा लाग्ने मेलामा हजारौँ भक्तजनको भीड लाग्थ्यो ।
आमा नहुने नरनारी औँसीका दिन बिहानै उक्त तीर्थमा गई स्नान तथा हरिहर (विष्णु र शिव)को दर्शन र पूजा गर्ने गर्थे । यस वर्ष स्थानीयवासीलाई पनि मातातीर्थमा नजान सूचित गरिएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले राससलाई जानकारी दिए। यद्यपि नजीकैका केही स्थानीयवासी भने मातातीर्थमा आएर पूजाआराधना गरेका थिए । हजारौँको भीड हुने दिन एक, दुईजना आए पनि मातातीर्थ सुनसान बनेको छ ।
मातातीर्थ संरक्षण समितिले गर्ने नित्य पूजा भने विधिवत् सम्पन्न गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । घरघरमै बसेर जीवित आमालाई खुशी बनाउने र मृत आमाका नाममा श्रद्धा प्रकट गर्न सकिने धर्मशास्त्रविद्को भनाइ छ ।
मातातीर्थको परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित सबैकी आमाको प्रतीक ‘साझा आमा’ को मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ । यो मूर्तिले पनि मातातीर्थको महत्व बढाएको छ । मूर्ति स्थापना भएपछि यहाँ पूजा गर्ने भक्तजनको पनि भीड लाग्ने गरेको थियो ।
कोरोनाबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण छोराछोरी आमा भएको स्थानमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन । यसैले फोन, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट आमाप्रति सम्मान प्रकट गर्नु पनि शास्त्रसम्मत हुने धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताउँछन् । महामारीको यो बेलामा वचन वा भावले नै आमाप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्न सकिने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने उनले बताए ।